Shirkadeena ayaa kaqeybqaadatay 2018 CACLP EXPO oo leh qalab cusub oo iskiis loo soo saaray. The 15th Shiinaha (Caalamiga ah) Sheybaarka Daawada iyo Qalabka Dhiiga Lagu shubo iyo Soo Bandhigga Reagent (CACLP) waxaa lagu qabtay Xarunta Caalamiga ee Expo ee Chongqing laga bilaabo Maarso 15 ilaa 20, 2018. ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. bayoolojiga qalabka baaritaanka cudurka cusub ee corona ayaa helay shahaadada CE, oo gacan ka geysaneysa ka hortagga iyo xakamaynta aafooyinka adduunka.
Waqtigan xaadirka ah, faafida adduunka ee cudurka cusub ee oof-wareenka oof wareenka ah ayaa si xawli leh ugu soo kordhayay xaalad murugo leh. Labadii toddobaad ee la soo dhaafay, tirada kiisaska wadajirka ah-19 ee ka baxsan Shiinaha ayaa kordhay 13 laab, tirada waddammada ay dhibaatadu saameyseyna way saddex laabantay. WHO ayaa aaminsan in ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. waxay si kal iyo laab ah kuugu martiqaadeysaa inaad kaqeyb gasho Bandhiga Tacliinta Sare ee Shiinaha (deyrta, 2019)
China Expo Expo Expo (HEEC) ayaa si guul ah loo qabtay 52 jeer. Sannad kasta, waxaa loo qaybiyaa laba kal-fadhi: guga iyo deyrta. Waxay ku wareegaysaa dhammaan gobollada Shiinaha si ay u waddo horumarka warshadaha ee dhammaan gobollada. Hadda, HEEC waa midka kaliya ee leh cabirka ugu ballaaran, ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. waxay si guul leh u soo saartay xirmada tijaabada cusub ee 'Coronavirus'
01 Horumarkii ugu dambeeyay ee cudurka faafa Bishii Diseembar 2019, taxane ah kiisaska oof-wareenka oof-wareenka aan la fahmin ayaa ka dhacay Wuhan. Dhacdadan waxaa si weyn uga walaacsanaa dhammaan qeybaha bulshada. Cudur-keenaha ayaa markii hore loo aqoonsaday inuu yahay virus-ka New Corona waxaana loogu magac daray "2019 New Corona virus (2019-nCoV) & ...
Kaqeybgalka Bigfish ee talaabada wadajirka ah ee ladagaalanka cudurada faafa ayaa si guul leh ku dhameeyay howsha isla markaana kusoo laabtay guul
Kadib bil iyo badh shaqo xoog leh, duhurkii markay ahayd 9-ka bisha July waqtiga Bejinga, kooxda caalamiga ah ee ka hortagga cudurrada faafa ee wadajirka ah ee loo yaqaan 'bigfish' ayaa si habsami leh uga soo qaybgalay hawshoodii waxayna si nabadgelyo ah ku yimaadeen garoonka caalamiga ah ee Tianjin Binhai. Kadib 14 maalmood oo go'doomin dhexe ah, wakiil ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. ficilkeeda wadajirka ah ee lagula dagaallamayo cudurka cusub ee loo yaqaan 'corona virus pneumonia' ee Morocco
Cudurka fayraska ee 'Novel corona virus pneumonia' ayaa la bilaabay bishii May 26-keedii oo ay sameeyeen COVID-19 koox isku dhaf ah oo caalami ah si ay taageero farsamo ugu diraan Marooko si ay uga caawiso Morocco inay la dagaallanto caabuqa sambabka cusub. Sida xubin ka mid ah covid-19 tallaabada wadajirka ah ee caalamiga ah ee ka dhanka ah faafa, Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. pa ...
Analystica Shiinaha 2020 wuu dhammaanayaa
10-ka falanqeyn ee Shiinaha 2020 ee Munich ayaa si guul leh loogu soo gabagabeeyay Shanghai New International Expo Center bishii Nofeembar 18, 2020. Marka la barbardhigo 2018, sannadkan waa gaar gaar. Xaaladda faafa ee dibada waa mid xun, waxaana jira faafitaano goos goos ah oo ka dhaca ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. wuxuu kaqeyb galayaa Shirka 9-aad ee Liman China Pig Raising
"Xuanku wuxuu fiirinayaa roobka deyrta, qabooji dharka xagaaga Qing.". Roobkii dayrta, Shirweynihii 9aad ee Liman ee Shiinaha Doofaarka Doofaarka iyo Carwada Doofaarka Adduunka ee 2020 ayaa si guul leh loogu xiray Chongqing Oktoobar 16! In kastoo af ...
Waxaan kuugu hambalyeynayaa Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. ku guuleysiga Shahaadada Qaranka
Horumarka sayniska nolosha si dhakhso leh ayuu isu beddelaa. Fikradda ogaanshaha asiidhka nukliyeerka ee bayoolojiga molecular waxaa og dadwaynaha guud ahaan natiijada ka dhalatay faafida cudurka jeermiska ee New Corona. Ogaanshaha Nucleic acid wuxuu kaloo door muhiim ah ka ciyaaray ka hortagga iyo xakameynta epide ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. waxay kaa caawineysaa xalinta qandhada doofaarka Afrika (ASF)
Horumarka la xiriira Sida laga soo xigtay Xafiiska Warfaafinta ee Wasaaradda Beeraha iyo miyiga, bishii Ogosto 2018, cudurka doofaarka ee Afrika wuxuu ka dhacay Degmada Shenbei New, Shenyang City, Gobolka Liaoning, oo ah tii ugu horreysay ee Afrika ee doofaarka ku dhacda Shiinaha. Laga soo bilaabo Januar ...
CACLP 2021 ubaxyada guga diiran ayaa kuu imanaya
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. waxay kaqeyb galeysaa CACLP 2021 Maarso 28-30, 2021, waxaa la qabtay 18-ka Shiinaha ee Shaybaarka Caalamiga ah ee Daawada iyo Qalabka Dhiiga lagu shubo iyo Reagents Expo & China China first IVD Upstream Raw Raws and Manufacturing Supply Chain Expo ayaa la qabtay gudaha Chongqi ...
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. waxay si guul leh uga qeyb qaadatay caclp2020 oo ay saameyn ku yeelatay COVID-19, bandhigga CACLP wuxuu soo maray taxane wareegyo kala duwan ah. Bishii Ogos 21-23, 2020, waxaan aakhirkii nimid Daawada Shaybaadhka Caalamiga ah ee 17aad iyo Dhiig Transfu ...